China Electric Suction Machine (jar kambana) sy mpanamboatra | AngelBiss
AngelBiss Electric Suction Machine (jar kambana) dia ampiasaina hitsentsitra ranon-javatra isan-karazany, toy ny pus, phlegm ary ra. Ilaina tokoa amin'ny fitsaboana nify sy ny vonjy taitra ary ny efitrano fandidiana. Natao manokana ho an'ny rindranasa misy toetrany mikoriana sy fanerena, ny milina fitrohana azo entina dia manome fomba haingana sy mahomby hanadiovana ny ra, na ranon-javatra ara-pitsaboana hafa mandritra ny fitsaboana ny nify. Izy io dia manana fomba roa karazana vokatra: 25L & 30L. Ny fahaizan'ny tavoahangy roa dia hanalavitra anao amin'ny famerenanao ny paompy. Ary ny tavoahangy dia tantera-drano sy azo ampiasaina indray. Hamonjy fotoana sy enti-miasa izany.
Ny milina fitrohana herinaratra dia miompana amin'ny paompy tsindry ratsy, mpanitsy tsindry ratsy, tondro tsindry ratsy, manangona singa fitoeran-javatra, fanodinan-tongotra, tranga. Ary ny vokatra dia afaka mamaly ny karazana hopitaly sy ny tobim-pitsaboana takiana amin'ny fahombiazan'ny fandidiana ara-pitsaboana, manintona ny fitakiana onjampeo lehibe ho an'ny tobim-pitsaboana ho an'ny tsiranoka fandidiana fandidiana miaraka amin'ny tanimanga samihafa hisarihana. Ary miaraka amin'ny rafitra mitsangana, endrika maoderina. Avy amin'ny firafitra iray manontolo, endrika ivelany miseho mahafatifaty io .Dy paompy fantsona piston loha roa loha dia raisina ho tsindry ratsy, tabataba ambany. Tsy misy solika ihany koa.
Ary manana modely fandidiana roa samy hafa koa izy, fa ny switch switch manual sy pedal dia ampiasaina miaraka. Mora ny miasa. Ny fomba fiasa vokatra dia ny maody terminal, mihoatra ny 25L / Min. Hofenoin'ny carton.
1. Ny milina fitrohana herinaratra dia miompana amin'ny paompy tsindry ratsy, mpanitsy tsindry ratsy, tondro fanerena ratsy, manangona singa fitoeran-javatra, fanodin-tongotra, tranga.
2. Afaka mahafeno ny karazana hopitaly sy ny fitsaboana ilaina amin'ny fahombiazan'ny fandidiana ara-pitsaboana, manintona ny fepetra takiana amin'ny onjam-pitsaboana ho an'ny foiben'ny fandidiana miaraka amin'ny tanimanga samihafa mba hisarihana.
3. Rafitra mitsangana, endrika maoderina, bika tsara tarehy.
4. Paompy fantsom-pisakafoanana loha loha dia noraisina ho tsindry ratsy, tabataba ambany.
5. Miaraka amin'ny fitaovana fiarovana fiarovana mahery vaika, tsotra ny asa fikojakojana, tsy mila menaka ampiana.
6. Ny switch manual sy pedal dia ampiasaina miaraka, fandidiana mora.
7. Araka ny karazana sy ny haavon'ny fisorohana ny eletice shock, ny masinina suction dia nozaraina ho fitaovana I ary ny ampahany fampiharana B karazana. Ny maody mihazakazaka dia fandidiana mitohy, IPXO, fa tsy AP karazana sy APG karazana fitaovana mahazatra.
8. Ny vokatra dia mahafeno ny fepetra takian'ny IEC60601-1, IEC60601-1-2, ISO 10079-1.
Fetran'ny tsindry ratsy
Halaviran'ny fanerena tsindry ratsy
Fahafahana fitahirizana entana
Hole (rivotra vent) ≥35L / min
Previous: Pulse Oximeter
Manaraka: Mpifantoka oksizenina ANGEL-5S
Masinina mitsentsitra am-bava ivelany
Masinina mitsoka hopitaly
Masinina mitsoka fanafody
Masinina mitsentsitra fandidiana am-bava
Masinina manery manery
Masinina misintona vonjy taitra
Masinina mitsoka rivotra